सुख समृद्धि र धन प्राप्त गर्न यस्ताे गर्नुहोस्
पाेखरा २४ साउन- महाशिवरात्री हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको एक बिशेष पर्ब हो । शिवरात्रीको दिन हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले बिभिन्न अनेक उपसना गरेर शिव भगवानलाई प्रसन्न पार्ने गरिन्छ ।
शिवरात्रीको दिन भक्तजनहरुले विशेष महत्वको साथ अनेक उपसना गरेर शिवको पुजा गरिन्छ । महाशिवरात्रीको दिन शिव मन्दिरमा गएर शुद्ध मनले स्नान गरेर शिवजीलाई खुसी पार्ने गरिन्छ ।
हरेक वर्ष फाल्गुन महिनामा पर्ने शिवरात्रीलाई विशेष महत्वको साथ मानिन्छ ।शिवको पुजा आरधना गर्नाले व्यक्तिकोे जीवनमा सुख, समृद्धि साथै धन प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ । यो वर्षको शिवरात्रीमा शिवजीलाई कसरी खुशि बनाउने ती उपाय आज हामि बताउदै छौ ।
१. विधिवत रुपमा शिवलिंगीमा पुजा गर्ने
२. शिवलिंगीमा जल चडाइ शिवलिंगीलाई स्पर्श गरेर ॐ नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्ने
३. तिल, जौ, सातु, बेलपत्र, फलफुल, चन्दन, धतुरो, घ्यू, मह, रुद्राक्ष आदि चढाउने र धुप बत्ति बाल्ने
४. शिवरात्रीको दिन निराहार बस्ने यदि नसक्ने भए फलाहार खाएर व्रत बस्ने
५. शिवरात्रीको दिन शिवको तस्वीर अथवा शिव मन्दिरमा गएर पुजा गर्ने ।
६. शिवरात्रीको दिन कालो रंगको कपडा प्रयोग गर्नु हुदैन ।
७. सबैभन्दा पहिले माता पार्वतीको साथै नन्दीलाई जल अर्पण गर्ने
औँलामा बाँधेको कपडाको ऋण द्रौपदीको साडी लामो पारेर लाज बचाएसँगै कृष्णले तिरे
आज मित्रता दिवस । हरेक वर्ष अगष्ट महिनाको पहिलो आइतबार यो दिवस मनाउने गरिन्छ । मित्रताको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ जुन व्यक्ति आफैँले चुन्ने गर्दछ । हामीलाई कोहीसँग साथी चुन्ने वा नचुन्ने आफैँमा निर्भर गर्दछ । ग्रन्थमा कयौँ पौराणिक पात्रहरुको मित्रताका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
दुर्योधन र कर्ण
महाभारतमा दुर्योधन र कर्णको मित्रता खास थियो । दुर्योधनले कर्णलाई आफ्नो प्रिय मित्र माने र उचित सम्मान दिलाए । साथी भएर पनि कर्णले दुर्योधनलाई कहिले कहिले अधर्म गर्नबाट रोक्न सकेनन । महाभारतमा दुर्योधनको गल्तीका कारण उसको कुल नै नष्ट भयो । कर्ण धर्म—अधर्म जान्दथे, तर उनले दुर्योधनलाई रोक्न सकेनन् ।
कृष्ण र सुदामा
मित्रताको प्रशंगमा कृष्ण र सुदामा अर्को महत्वपूर्ण नाम हो । बालापनदेखि पछिसम्म यी दुइको मित्रता र साथको चर्चा जताततै चर्चित छ । यी दुइको मित्रताबाट साथी गरिब होस वा धनी त्यसको कुनै महत्व हुँदैन । मित्रता सबैमा समान हुन्छ र सबैले यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्दछ ।
श्रीराम र सुग्रीव
रामायणमा हनुमानजीले श्रीराम र सुग्रीवको मित्रता सुनाएका थिए । श्री रामले सुग्रीवलाई वचन दिएका थिए कि बालीसँग उसको राज्य र पत्नी फिर्ता दिलाउने छन् । सुग्रीवले सीताको खोजीमा सहयोगको वचन दिएका थिए । बालीलाई मारेर श्रीरामले आफ्नो वचन पूरा गरेका थिए । सुग्रीवलाई राजा बनाए । राजा बनेपछि सुग्रीवले आफ्नो वचन भूले, तब लक्ष्मण अत्यन्तै रिसाए । यसपछि सुग्रीवले गल्ति महशुष गरे र सीताको खोजमा निस्किए ।
श्रीकृष्ण र द्रौपदी
म्हाभारतमा श्रीकृष्ण र द्रौपदीको मित्रताको विशेष महत्व छ । दुबै सहपाठी । द्रौपदीको पिता महाराज द्रुपद चाहन्थे कि उनको पुत्रीको विवाह श्रीकृष्णसँग होस । तर श्रीकृष्णले द्रौपदीको विवाह अर्जनसँग गराए । श्रीकृष्णले हरेक मुश्किलमा द्रौपदीलाई मद्यत गरे । जब श्रीकृष्णले आफ्नो सुदर्शन चक्रले शिशुपालको वत्र गरे, सो चक्रको कारण उनको औँलामा चोट लाग्यो र रगत बग्न थाल्यो ।
द्रौपदीले आफ्नो वस्त्रबाट कपडा च्यातेर श्रीकृष्णको औँलामा बाँधिन । त्यसपछि सभामा द्रौपदीको चीरहरण भयो, श्रीकृष्णले औँलामा बाँधेको कपडाको ऋण द्रौपदीको साडी लामो पारेर लाज बचाएसँग तिरे । यसपछि पनि श्रीकृष्णले कयौँपटक द्रौपदीको समस्याबाट पार गराएका छन् ।
‘नाइटो’मा गहना झुन्डाएर झनै ‘सेक्सी’ बनेकी मोडल सगुन शाही [फाेटाे फिचर]
शरिरका यी ‘३ अंग’ पुरुषले हेरिराखुन् भन्ने चाहन्छन् युवतीहरु
शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला छोड्दै नछोड्नु…
जब बच्चाहरुको कार्यक्रममा चम्चा जस्तो ड्रेस लागाएर पुगिन उर्वशी, हेरौ तस्बिर